Mahazo vahana ny fiparitahan’ny Covid-19 noho ny fifaneraserana: miatrana eran’ny tanàna ny Emmo/Reg mirongo basy sy ny fiara mifono vy | NewsMada
Par Taratra sur 09/04/2020
Ho henjana ny fepetra. Mahazo vahana ary efa tafakatra hatrany amin’ny 93 ireo tratran’ny coronavirus manerana ny Nosy. Maro amin’ireo no vokatry ny fifampikasohana sy fifaneraserana « cas contact ». Niditra an-tsehatra nanaparitaka ny olona ny Emmo/Reg.
Mbola marobe ireo olona nifamezivezy. Nitombo ireo mpivarotra ary maro izy ireo raha ny teny Andravoahangy nikasa ny hamerina ny tsena alarobia, omaly. Teo koa ireo niantsena na koa manao ny asa an-tselika. Nitohana ny fifamoivoizana, indrindra ho an’ny teny Ankadimbahoaka sy ny teny An­doha­tapenaka na ny faritra sasany. Niatrana vao maraina tamin’ny toerana maro ny Emmo/Reg, nirongo basy sy ny fiara mifono vy ary ireo fiara 4×4 an’ny tafika.
Noravana ny tsena teny Andravoahangy
Noravan’izy ireo ny mpivarotra teny Andravoahangy, mbola teo an-toerana na efa tamin’ny 12 ora, fotoana tokony tsy hivarotana intsony aza. Tahaka izany koa ireo mpiantsena, nentanina hamonjy fodiana. Napetraka ny sakana sy ny fisavana teny Analakely sy ny manodidina. Nangina tanteraka teny an-toerana ny tolakandro. « Aoka samy hanaja ny fitsipika hifampifehezana sy ny toromarika isika », hoy ny eo anivon’ny mpitandro filaminana. Na izany aza, mbola maro ireo olona nifamezivezy ho an’ny eny Anosibe ary koa Anosizato sy ny faritra hafa. Anisan’ny mampihanaka sy mampahazo vahana ny co­ronavirus ny fifaneraserana sy ny fi­fam- ­pi­kasohana, indrindra rehefa tsy voaraka ny fepetra.
Olona dimy hafa indray no voa, 11 no sitrana
Manamarina izany ny tranga vaovao dimy tratran’ny coronavirus, taorian’ny fitiliana, omaly. Lehilahy 49 sy 62 taona avy eto Anta­nanarivo ny roa raha avy any Analanjirofo kosa ny roa hafa, 57 sy 48 taona. Vokatry ny fifampikasohana ny efatra raha ny iray kosa tonga tamin’ny sidina ny 19 marsa teo.
Tafakatra 93 izany ireo tratran’ny covid-19 manerana ny Nosy.
Na izany aza, efatra indray ireo sitrana soaman-tsara, omaly ary nody any an-tokantranony, niampy ireo fito teo aloha ka tafakatra 11 izany izao izy ireo, nandao ny hopitaly. Miisa 82 sisa ireo tazonina sy tsaboiana ary arahi-maso any amin’ny hopitaly.